उदय दाइ - Fonij Korea
लेखक: फोनिज कोरिया संवादाता | प्रकाशीत मिति: October 6, 2018
घटना झन्डै दस बर्ष अघिको हो । उदय राई अरु नेपाली झै कोरियनसँगै काम गर्थे । विदेशी भए पछि अलि अलि कोरियनको हप्की दप्की समान्य नै मान्थे उनी । सदा झै उनी कम्पनीमा काम गर्दैथे । एक्कासी के समान बिग्रियो भनेर कोरियनले उनी माथि हात हाले । अर्काको देश । कता गएर के भन्नु ? आफ्नो पीडा कहाँ गएर भन्नु ? उनले सबै तिर चाहारे । संघसंस्थाहरु धाए । पुलिसमा भने । उनले चित्त बुझ्नो समाधान भेटेनन् । धेरै खोजे पछि आफ्नो जस्तै समस्या सुनिदिने संस्था भेटाए प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु) । त्यही बेला देखि उनी एमटियुमा छन् ।
पहिलो बर्ष नै उनले सउल शाखाको जिम्मेवारी पाए । आफ्नो बल बुताले भ्याउने गरि उनले काम गरे । नभन्दै उनको शाखा कोरिया भरिमै राम्रो काम गरेको शाखा बन्यो । सयौको संख्यामा एमटियुका सदस्य बने । उनको काम गर्ने शैली र नेतृत्व गर्ने क्षमताबाट साथीभाइ प्रभावित भए । सन् २०१४ देखि उनी एमटियुको अध्यक्षमा छन् । अहिले उनको दोस्रो कार्यकाल चलि रहेको छ । नेपाल, बंगलादेश, इन्डोनेशिया, श्रिलंका, म्यानमार, उज्वेकिस्तान, थाइलेन्ड र भियतनाम गरि आठ देशका श्रमिकहरुको यो संगठनमा १६ सय भन्दा बढि सदस्य छन् ।
उनको नेतृत्वको एमटियुले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)लाई खारेज गरेर कार्य भिसा प्रणली (डब्लुपियस) सिस्टमको माग गरि रहेको छ । त्यसैले उनी हरेक दिन व्यस्त हुन्छन् । विदेशी कामदार कोरिया आउदैछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै एयरपोर्टमा पुग्छन् । इपियसका बेफाइदाका कुरा गर्छन् । डब्लुपियसका फाइदाका कुरा गर्छन् । साथै कोरियन सरकारले विदेशी कामदार प्रतिको खराब नीति र यहाँ आइ पर्ने सम्भावित समस्या बारेमा जानकारि गराउछन । सचेत गराउछन । कोरियन श्रम कानुनका बारेमा जानकारि गराउछन ।
कोरियाको लामो बिदा छुसक र सलनालमा आयोजना हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभा समारोहमा उनी भ्याए सम्म जान्छन् । नेपालीहरु बाक्लै हुने भएकोले आफ्ना कुरा मिलाएर भन्छन् ।
स्वइच्छाले कम्पनी परिवर्तन गर्नु पाउनु पर्ने, कम्पनीले खानबस्न सुबिधा दिए बापत तलबको बीस प्रतिशत सम्म काट्न पाउने जारि गरेको निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने, हालै सरकारले आगमी बर्ष देखि लागु हुने तलब बृद्धि कम्पनी व्यावसायीले घटाउनु पर्ने भनि राखेको माग फिर्ता गर्नु पर्ने, रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) खारेज गरि कार्य भिसा प्रणाली (डब्लुपियस) लागु हुनु पर्ने मागहरु यमटियुका मुख्य माग हुन् ।
त्यसैगरि कृषि क्षेत्रको मजदुर कानुनको धारा ६३ खारेज गर्नुपर्ने, प्रबासी महिला श्रमिकलाई गरिने भेदभाब र दुव्र्यावहार बन्द गर्नुपर्ने, बिनाभिसाको आप्रबासीलाई भिसा प्रदान गर्नु पर्ने लगयतको माग पनि छन् ।
यस्ता माग राखेर यमटियुले धेरै आन्दोलन गरि सकेको छ । कोरियाको ठूलो सहर यजु, छुङसङनाम्दो, याङफ्यङ, ह्वासङ, थेजन, छङजु, आन्सान लगायतका ठाउँमा घुम्ति र्याली निकालि सकेकाका छन । एमटियुले कुनै कामदारलाई मालिकले तलब नदिने, दुर्व्यवहार गरेको पाएमा सम्बन्धित कम्पनी मै पुगेर वा सोही क्षेत्रको नोदङवु (जबसेन्टर) मै गएर आन्दोलन गर्छन । कुरा राख्छन् । यसरी सयौको उद्धार गरेको छ । कम्पनी परिवर्तन गर्न सहयोग गरेका छन् ।
मजदुर युनियन भए पनि एमटियु कोरिया सरकारबाट अनुमति लिएर चलेको संस्था हो । सन् २००५ मा स्थापना भएको यो एक मात्र प्रबासि मजदुरको हितमा काम गर्ने आधिकारिक संस्था मानिन्छ ।
प्रबासि मजदुरलाई सहयोग गर्न राई दिनरात लागि पर्छन । खट्छन् । सानै सहयोगले पनि कहिले कही ठूलो उपलब्धी हुन्छ । दुई बर्ष अघिको घट्ना सम्झिन्छन् । फाजु सिमा एक नेपालीलाई चाइनिजले कुटेछन् । आँखामा गहिरो चोट लागेछ । कम्पनी मालिकले चाइनिजलाई सामान्य उपचार गराएर मिल्न भनेछन् । नेपालीलाई कोरियन भाषा राम्रो नआउने । पछि राईलाई पीडितले समस्या सुनाए । उनले दोभाषेको काम गरे । सम्बन्धित निकायमा कुरा राखे । त्यस पछि पीडितले चालिस लाख वोन उपचार खर्च पाए ।
कोरियामा मान्छे बढ्दै जाँदा समस्या पनि अनेक थरिका छन् । मुख्य भाषाको समस्या छ । त्यसैले दोभासे देखि काम खोज्ने, कम्पनि परिबर्त गराउने, नदिएको तलब सम्बन्धित निकायमा उजुरि गरेर दिलाउने काम पनि एमटियुले गर्छ ।
नेपालको खोटाङ मझुवामा जन्मेर कर्म भुमि कोरिया बनाउदै आएका राईको नेतृत्वमा प्रबासी मजदुर युनियन अघि बढि रहेको छ । समस्या एकै चोटी समाधान त हुदैन । तर बिस्तारै बिस्तारै दबाब दिदै जानु पर्छ भन्ने मान्छन् उनी । त्यसैले अक्टाेबर १४ सउलको रास्ट्रपति भवन र श्रम मन्त्रालय विशाल र्याली आयोजना हुदैछ । तँपाई पनि आउनुहुन्छ कि उदय दाइलाई भेट्न ।